अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, अन्य देशको मुद्राको भाउ हेर्नुहोस् « गोर्खाली खबर डटकम
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, अन्य देशको मुद्राको भाउ हेर्नुहोस्
अमेरिकी डल’रको उकालो यात्रा कायम रहेको छ। शुक्रबारबाट उकालो लागेको यात्रा शनिवार १० पैसाले बढेको हो। शुक्रबार ११९ रुपैयाँ ४५ पैसामा कारोबार भएको अमेरिकी ड’लर शनिबार पुग्दा ११९ रुपैयाँ ५५ पैसामा कारोबार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी डलरउकालो लाग्न थालेप’छि यूरोपीयन यूरो र पाउण्ड स्टर्लिङको उका’लो यात्रामा भने ब्रेकलागेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसा’र शनिबार अमे’रिकी डलर १ को खरिददर ११९ रुपैयाँ ५५ पैसा विक्रीदर १२० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ। यूरोपीयन यूरोको खरिददर १४० रुपै’याँ ९९ पैसा, विक्रीदर १४१ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ।
पाउण्ड स्टर्लि’ङ १ को खरिददर १५६ रुपैयाँ २१ पैसा, विक्रीदर १५७ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर १ को खरि’ददर ८५ रुपैयाँ ३६ पैसा, विक्रीदर ८५ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ।
साउदी रियाल १ को खरिद’दर ३१ रुपैयाँ ८८ पैसा, विक्रि’दर ३२ रुपैयाँ ०४ पैसा, यस्तै कतारी रि’याल १ को खरि’ददर ३२ रुपैयाँ ८३ पैसा र विक्रीदर ३२ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ।
यूएइ दिराम १ को खरिददर ३२ रुपैयाँ ५५ पैसा, विक्री’दर ३२ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिंगेट १ को खरिददर २८ रुपैयाँ ५१ पैसा र विक्रीदर २८ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको ने’पाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मलेसियन रिंगेटमा भने शुक्रबार र शनिबार एउटै दरमा कारोबार भएको छ।
चीनको केरुङ च्छो ताल फुट्ने भएपछि सिन्धुलीका नदी किनारका बस्ती खाली गरिदैं
दैनिक दिसा लाग्दैन ? नआत्तिनुहोस् यस्ता छन् घरेलु उपाय !
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा भदौ ८ सम्म थप, राति ८ बजेपछि सवारी चलाउन नपाइने